देशभरका अस्पतालमै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने - Online Majdoor
देशभरका अस्पतालमै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा गर्न पाउने जनताको मौलिक अधिकार हो । तर, सरकारले जनताको स्वास्थ्य सेवा गर्न पाउने मौलिक हक वञ्चित ग¥यो । पहिले पु¥याउँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवासमेत सरकारले हटाएपछि सरकारको व्यापक विरोध भयो । जनताका मौलिक अधिकार हनन गर्ने सरकारविरूद्ध कानुनविद्हरूले मुद्दा हाल्ने तयारी गरेपछि सरकारले पहिलेको निर्णय संशोधन गरी फेरि निःशुल्क सेवा गर्ने निर्णय ग¥यो । सरकारी उक्त निर्णय सरकारी सूचिकृत अस्पतालहरूमा मात्र लागू हुन्छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्ने काम सरकारको हो, लागू गर्न पहल गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा देशभरका सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा पनि लागू हुनुपर्छ । निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउन सरकारले अस्पतालको लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, औषधोपचारका सामग्रीहरूको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।
सरकारी नियम देशभर लागू हुनुपर्छ । कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र औषधोपचार देशभर निःशुल्क भएमा सबै पीडितहरूले समयमै राहत पाउनेछन् । यसले कोरोना सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्या घटाउनेछ । स्वास्थ्य सेवामा पु¥याउँदै आएको कामबाट सरकार पछि हट्नु हुँदैनथ्यो । कसको दबाबमा पु¥याइँदै आएको स्वास्थ्य सेवाबाट हात झिक्न सरकारलाई बाध्य भयो ? स्वास्थ्य सेवाबाट हात झिक्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी कार्यमात्र होइन यो संविधानको खुला उल्लङ्घन हो । संवैधानिक व्यवस्थामा रहेको अधिकार मिच्न सरकार किन अघि स¥यो ? कम्युनिस्ट भनिने सरकारले त बढीभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, जनताको भावनाविपरीत सरकार लाग्यो । यसले पनि थाहा हुन्छ, नेकपाको सरकार जनताको सेवामा लागेको छैन । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनताको व्यापक दबाबले मात्र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने काम सरकारले ग¥यो । यो केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा सरकारको बुद्धि होइन भन्ने थाहा हुन्छ । यसरी नेकपाको सरकार देश र जनताको सेवामा चुकेको छ । हाल नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच भइरहेको अन्तद्र्वन्द्वले सत्तारूढ दलका नेताहरू आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धता र घोषणापत्रको मतलब राख्दैन भन्ने सङ्केत गर्छ । नेकपा सिद्धान्त र विचारबाट विचलित हुँदाको परिणाम हो यो ।
भक्तपुर अस्पतालको विकासबारे
बैठक बोलाउन पनि धम्की !
सक्वको म राजदास – ६०
एउटा अर्को जनआन्दोलनको माग